Xildhibaanada BF oo loo qeybinayo mooshinkii ugu adkaa oo la horkeeno BF - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada BF oo loo qeybinayo mooshinkii ugu adkaa oo la horkeeno BF
Xildhibaanada BF oo loo qeybinayo mooshinkii ugu adkaa oo la horkeeno BF
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta lagu wadaa in Baarlamaanka Federaalka Somalia loo qeybiyo Mooshin ka dhan ah Heshiiska Saldhiga Imaaraadka lagu siiyay magaalada Berbera ee maamulka Somaliland.
Mooshinkaani ayaa waxaa Guddoonka sare ee BFS u gudbiyay Xildhibaano ka tirsan BF, waxaana maanta la filayaa in Mooshinkaasi loo qeybiyo dhammaan Xildhibaanada BF.
Mooshinka ayaa lagu diidan yahay in Dowlada Imaaraadka ay dhisato Saldhiga, waxa ayna Xildhibaanadu yihiin kuwo aad uga soo horjeeda xad gudubka Dowlada Imaaraadka.
Xildhibaano uu kamid yahay Xildhibaan C/llaahi Sheekh ismaaciil ayaa sheegay inaan BFS laga sugi doonin inay ka aamusaan xadgudubka Dowlada Imaaraadka.
Xildhibaanka waxa uu sheegay in Heshiiska Somaliland iyo Imaaraadka ay ku hakin doonaan Mooshin, isagoo intaa raaciyay inaan la aqbali doonin in Heshiis noocaasi ah ay gasho Somaliland.
Sidoo kale, Xil. C/llaahi Sheekh ismaaciil waxa uu sheegay in Baarlamaanka Somaliland ay ku qaldan yihiin in ay ansixiyaan sharciga ay dowladda Imaaraadka Carabta Saldhig kaga furaneyso Magaalada Berbera.
Geesta kale, Baarlamaanka Somalia ayaa ka siman Mooshinka looga soo horjeedo Heshiiska Somaliland iyo Imaaraadka Carabka ee lagu bixiyay Saldhig Millitery.